नयाँ आर्थिक वर्षमा ८ खर्बको बजेट आउने, आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुर्‍याइने
काठमाडौँ, २६ माघ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ का लागि सात खर्ब ३५ अर्ब ४७ करोडको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको स्रोत समितिको...
काठमाडौं, २६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा नेपालभरी एउटै मूल्यमा साट्न वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विदेशी मुद्रा सटहीको दर सबै ठाउँमा फरक फरक पाइएपछि त्यसमा एक रुपता ल्याउन राष्ट्र बैंकले...
जेठ दोस्रो साता उद्योग दिवस मनाउने सरकारको तयारी
काठमाडौँ, २६ माघ । जेठ दोस्रो मनाउने गरी सरकारले उद्योग दिवसको तयारी थालेको छ । उद्योग दिवसमा योगदान गरेका उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गरिनेछ । सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १३ गतेका दिनलाई उद्योग दिवसका रुपमा...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर बेच्नेको यस्तो हालत
बागलुङ, २६ माघ । भनिन्छ पाप धुरीबाट कराउँछ । तर साँच्चै हुँदो रहेछ । पेट्रोलियम पदार्थ लुकाएर मंहगोमा बेच्ने एक व्यापारीको हालत पनि यस्तै भएको छ । डिजेलमा कालाबजारी गरेको आरोपमा यहाँका एक व्यापारी कारागार चलान...
२५ वर्षपछि आइपुग्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नयाँ जहाज !
काठमाडौं, २५ माघ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले २५ वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेको नयाँ जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थमा उत्रिएको छ । यूरोपको फ्रान्सेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग खरिद गरेको ए ३२०–२००...
युवा-युवतीको डेटिङले मोबाइल प्रयोग गर्ने ४५ प्रतिशतले बढे
महेन्द्रनगर, २५ माघ । कञ्चनपुरमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । जिल्लामा एक वर्षमै ४५ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९र७० कोभन्दा आव ०७०र०७१ मा ४५ प्रतिशत मोबाइल प्रयोगकर्ता...
रसुवाको टिमुरेमा पुग्यो जनता बैंक, ग्राहलाई सहज सेवा दिने
काठमाडौं, २५ माघ । पश्चिमी नेपालको विकट रसुवा जिल्लामा जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले शाखा विस्तार गरेको छ । जनता बैंकले रसुवाको टिमुरेमा बैंकको ३३ औं शाखा स्थापना गरेको हो । आइतबार रसुवा शाखाको उद्घाटन...
मेगा बैंकको नाफा पाँच प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं, २५ माघ । पश्चिमाञ्चल विकास बैंकसंग मर्जर प्रक्रियामा रहेको मेघा बैंको नाफा ओरालो लागेको छ । बैंकको नाफा ५ प्रतिशतले घटेको हो । गत बर्षको पुससम्मको तुलनामा यो बर्षको पुसमा नाफा करिब ४.८२...
२ करोडको आयव्यय प्रस्तुत गर्दै सकियो धुलिखेल सहकारीको साधारणसभा
काठमाडौं, २४ माघ । राजधानीमा रहेको धुलिखेल सहकारीको चौथो साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । शनिबार काठमाडौमलको ग्यालेक्सी पार्टी प्यालेसमा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव वडालले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख...
सुदूरपश्चिममा गुणस्तरहीन नुन छ्यापछ्याप्ती
काठमाडौं, २४ माघ । परम्परागत प्रचलनको ढिके नुनको प्रयोगका कारण सुदूरपश्चिमका नागरिक आयोडिनको पहुँचमा पुग्न नसकेका एक अध्ययनले देखाएको छ । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले सुदूरपश्चिममा अधिकांश नागरिक अझै पनि ढिके नुन प्रयोग गर्दै आएको...
अब सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट चलाउनुस !
काठमाडौं, २१ माघ । सरकारले ल्याउन लागेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले सेवाग्राहीले सस्तोमा इन्टरनेट चलाउन पाउने भएका छन् । ब्रोडब्यान्ड नीति माघ अन्तिम साता पारित हुदै छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नीतिलाई...
औद्योगिक विकास ऐन अन्तिम चरणमा : मन्त्री बस्नेत
बनेपा, २४ माघ । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले औद्योगिक व्यवसायी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विभागले धुलिखेलमा दुई दिनसम्म आयोजना गरेको वार्षिक बजेट तर्जुमा गोष्ठीको समापनमा उहाँले ऐन...
« 1 … 832 833 834 835 836 … 901 »